Ankafizo ny fandrakofana amin'ny tranobe miaraka amin'ny StellaHome | Vaovao IPhone
Ampitomboy ny fandrakofana finday ho an'ny fitaovanao ao anatin'ny trano miaraka amin'i StellaDoradus
Fantatsika daholo izany ny fahita matetika amin'ny finday dia manana olana amin'ny fahatongavana ao anatin'ny trano: ny fitaovana ampiasaina amin'ny fananganana dia mamorona sakana tsy voavaha indraindray ho famantarana izay, indraindray, tonga efa malemy noho ny dia lavitra tamin'ny tranoben'ny mpandraharaha anay. Izany dia miteraka antso an-kalalahana na ambany kalitao (feo tsy re na choppy) ary fifandraisana Internet amin'ny hafainganam-pandeha mampatsiahy ny modemantsika taloha 56K.
El StellaHome GSM + 4G amplifier mamaha ny olana "Mitsambikina" ny sakana, izany hoe mandray ny signal finday amin'ny fotoana iray ivelan'ny trano misy signal tsara (mitandrema, mila mahita bara famantarana telo farafahakeliny eo amin'ny findaintsika amin'izay fotoana izay isika mba hiasa tsara ny rafitra ), ary mampiditra azy ao amin'ny tranobe misy doka fanamafisana tsara.
Ity fanamafisam-peo ity dia mifandraika amin'ireo zana-kazo roa mahaliana indrindra ankehitriny: 900Mhz (matetika ampiasain'ny GSM ho an'ny feo hatramin'ny nanombohan'ny telephony finday niomerika) sy 800Mhz (ilay fahitalavitra finday vao navotsotra izay ampiasain'ny mpandraharaha soa aman-tsara. Hampitana 4G). Amin'izay ianao dia miantoka fiantsoana feo milay ary Angona finday 4G na aiza na aiza ao amin'ny atitany an'ny trano.
Tsotra fotsiny ny fametrahanaRaha ny marina dia natao ho anao hametaka azy io: misy antena apetraka ivelan'ny tranobe (mazàna amin'ny tampon-trano), noho izany dia misy tariby coaxial tsy misy fatiantoka ambany mitondra ny famantarana ao anatiny, izay misy ny amplifier. Farany, ny antena anatiny dia ampifandraisina amin'ny amplifier, izay no mizara ny famantarana ao anatin'ny trano. Ny amplifier dia mampiditra jiro famantarana marobe izay manamora ny fametrahana azy.
Satria mandefa ny GSM (feo) amin'ny 900Mhz ny mpandraharaha rehetra ary mampiasa (na ho avy tsy ho ela) 800Mhz amin'ny 4G, tsy maninona izay mpandraharaha finday miaraka aminao anio na miaraka aminao amin'ny ho avy: ny StellaHome GSM + 4G finday fampiroboroboana miasa amin'ny mpandraharaha rehetra, miaraka ary tsy mila mandamina na inona na inona.
Ny fanamafisam-peo mampiditra faribolana fiarovana hialana amin'ny tabataba manelingelina sy ny fanelingelenana izay ampidirina amina tambajotran'ny mpandraharaha matetika ny fanamafisam-peo ambany kalitao.
Ny fanamafisam-peo StellaHome GSM + 4G dia manana antoka eropeana 5 taona, ary na dia ny famerenanao ny volanao hatramin'ny 30 andro raha tsy mifanaraka amin'ny antenainao ny kit. Ny vidin'ny kit dia € 556,00 Tafiditra ao ny VAT.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fitaovana IPhone » Ampitomboy ny fandrakofana finday ho an'ny fitaovanao ao anatin'ny trano miaraka amin'i StellaDoradus
Fa ny zavatra lazain'izy ireo dia tsy marina tanteraka.
Yoigo, ohatra, dia tsy mampiasa na hampiasa ny tarika 800Mhz amin'ny ho avy.
Marina, tsy mampiasa ny tarika 800Mhz i Yoigo amin'izao fotoana izao, ny 4G azy dia ampitaina amin'ny 1800Mhz, fa ireo mpandraharaha lehibe 3 hafa kosa dia mampiasa azy io ary iza no mahalala izay hitranga amin'ny ho avy?
maro be dia hoy izy:
Tsy azoko antoka fa azoko tsara fa any amin'ny firenena sasany dia tsy manara-dalàna ny fampiroboroboana signal raha tsy misy fahazoan-dàlana avy amin'ny governemanta. Hanasokajy toy izany ve izy io?
Mamaly an'i onca
Any Espana dia tsy hoe tsy ara-dalàna izy ireo, hoy ny lalàna fa tsy maintsy apetrak'ireo mpandraharaha finday na eo ambany andraikitr'izy ireo. Raha ny tena izy, raha amplifier kalitao izy io, izay misy rafitra fiarovana ho an'ny tamba-jotra amin'ilay mpandraharaha, tsy misy olona hahalala hoe manana izany ianao ary tsy misy olona hilaza aminao na inona na inona. Ny zavatra iray hafa dia raha toa ka amplifier mora vidy izay mametraka tabataba ao anaty tambajotra, dia amboary fa tereny ianao hanala azy.
Walmart Pay, endrika fandoavam-bola elektronika vaovao hafa
Podcast 6x14 an'ny Actualidad iPhone: Tranga vaovao voatsikera ho an'ny iPhone 6s